Apple Watch - Apple Watch | ငါက Mac ပါ
နောက်ဆုံးတော့ နှစ်ခုအရှည်ကောလာဟလများနှင့်ပြည့်ဝ၏နှစ်ပေါင်း စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၄ အင်္ဂါနေ့အင်္ဂါနေ့နောက်ဆုံးထုတ် Keynote တွင် Apple iWatch နှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Apple မှ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြခဲ့သည် စမတ်လက်ပတ်နာရီ။ iWatch လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တဲ့ဒီနာရီဟာ Apple မှာဒီနာမည်နဲ့ပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့မူပိုင်ခွင့်များစွာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာeလို့ခေါ်တယ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ခြောက်သွေ့ရန်။
ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Cook ကဒဏ္myာရီဆန်သောစကားစုများအပြီးတွင်စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် Keynote တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ သူကွယ်လွန်သွားသော Steve Jobs က၎င်းကိုကုမ္ပဏီ၏နာမည်ကျော်ကြားစေခဲ့သည် "နောက်တစ်ခု ..." နောက်ထပ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ Tim Cook မှအက်ပဲလ်၏စီအီးအိုအဖြစ်သူ၏သမိုင်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည် သူတို့သိပ်သဘောကျတာကို.
၃ Apple Watch မော်ဒယ်လ်များ
အက်ပဲလ်ကဒီနာရီသစ်ကိုအများပြည်သူနှစ်သက်ဖို့အတွက်တင်ဆက်လိုက်တယ် သုံးကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များနှင့်နှစ် ဦး ကိုအရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလက်ကောက်ဝတ်များအတွက်။ ၏မော်ဒယ် သံမဏိ၏အားကစားပုံစံ လူမီနီယံ နှင့်အခြားခေါ်ဆိုမှု Edition ကို de 18 Karat ရွှေ။
ဤနည်းအားဖြင့် Apple သည်ထင်မြင်ချက်နှင့်ကောလာဟလများကိုအဆုံးသတ်ပစ်လိုက်သည် ပြီးပြည့်စုံသောအဖော် သင်၏ iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်အထူးသဖြင့် iPhone ဖြစ်သည်။
I am Mac တွင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးစတင်ခဲ့သည့် နေ့မှစ၍ ကိုက်သောပန်းသီးကုမ္ပဏီ၏ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဝတ်ရုံများ၏ပထမ ဦး ဆုံးအချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မင်္ဂလာပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ သတင်းတွေအားလုံးနဲ့အတူ။
အက်ပဲလ်ရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုက Apple Watch မှာဂလူးကို့စ် (glucose) စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုအတည်ပြုပုံရတယ်
por Manuel Alonso လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
နောက်လာမယ့် Apple Watch မှာထည့်သွင်းနိုင်မယ့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အကြောင်းကြာမြင့်စွာကတည်းကကောလဟာလတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့မော်နီတာအကြောင်းပြောဆို ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Apple Watch ရဲ့ watchface ကိုဘယ်လိုဝေမျှမလဲ
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
ဤသည်မှာ Apple Watch အသုံးပြုသူများသတိမပြုမိဘဲကျန်ခဲ့သောထိုရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၂၂ တွင် Apple Watch သည်ဂလူးကို့စ်မီတာကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
ယခုနှစ်အစတွင် Apple မှမှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့်အကြောင်းပြောခဲ့သည်။
မျက်နှာဖုံးတပ်ထားသော iPhone ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းပါ ၀ င်သည့် watchOS 7.4 တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
por Toni Cortes လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
နောက်ဆုံးတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာထုတ်လုပ်သည့် betas များအပြီးတွင် Apple သည်လူတိုင်းအတွက် watchOS 7.4 update အသစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
watchOS 7.4 သည် Apple Watch ၏ ECG ကိုသြစတြေးလျနှင့်ဗီယက်နမ်သို့ထည့်သွင်းလိုက်သည်
por Manuel Alonso လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
မနေ့က Apple ရဲ့နွေ ဦး ပွဲအခမ်းအနားမှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကဗားရှင်းကိုတင်ပြခဲ့တယ်။
WatchOS 7.4 ကို၎င်း၏ Release Candidate ဗားရှင်းတွင်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Apple ၏ "Spring loaded" ပွဲတွင်ယနေ့တွင် Apple က watchOS 7.4 အတွက် ...
ကမ္ဘာမြေကြီးနေ့တွင် Apple မှ Jane Fonda နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်
မင်းသမီးဂျိန်းဖွန်ဒါ၏ဆက်ဆံရေးသည်ယခုအချိန်တွင်ပင် Apple နှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန်ပြန်လည်ရပြန်သည်။
Apple Watch နှင့် COVID-19 နှင့် Apple လေ့လာမှုအသစ်
Cupertino ကုမ္ပဏီသည် ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများနှင့်ပူးတွဲလေ့လာမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Earth Day Challenge နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကများနေ့စိန်ခေါ်မှု
ယခုနှစ်thisပြီလတွင်အက်ပဲလ်စောင့်ကြည့်သူများသုံးစွဲသူများအတွက် Apple သည်စိန်ခေါ်မှုအသစ်နှစ်ခုကိုစတင်တော့မည်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုများ ...
Black Unity Sport Band သည်နိုင်ငံအတော်များများတွင်ရောင်းအားမကောင်းတော့ပါ
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလကအက်ပဲလ်သည် Black Unity သိုင်းကြိုးကိုဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Nomad Sport Lunar Grey, Nomad ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်သိုင်းကြိုး
ကျွန်ုပ်သည် Mac သုံးစွဲသူများအတွက် Nomad ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အကြံပြုခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းစောင့်ကြည့်မှုကသင့်အား Minnie နှင့် Mickey တို့နှင့်စကားပြောရသောအချိန်ကိုမပြောပါကဖြေရှင်းနည်း
ပထမမျိုးဆက် Apple Watch နှင့် Series 1 သည်အတူတူမဟုတ်ပါ